Yintoni oza kuyitya eBari | Ukuhamba kwe-Absolut
Yintoni oza kuyitya eBari
Enye yeefeshini ezidumileyo ehlabathini yiNtaliyane, ke xa uhamba akunakwenzeka ukuba ungadibanisi iikhilogremu ezimbalwa. Ukuya emazantsi sidibana nesinye sezona zixeko zidumileyo kunye nezokhenketho, iBari, ke namhlanje siza kufunda ngayo ukutya ntoni eBari.
Inyani yile yokuba ukutya kwase-Italiyane kuye kwafunyanwa kwaye kusafumana impembelelo yamakhitshi abamelwane bayo abasemngceleni, ke ngelixa emantla inezinye izidlo zaseFrance, ngasezantsi izitya zingaphezulu kweMeditera, zineentlanzi, ioyile yeoyile kunye neetumato. Ke, bhala phantsi olu lwazi ukonwabela ukutya eBari.
1 Ukutya kweBari
2 I-pasta ebhakwe
3 Intlanzi eluhlaza
7 Iitapile, irayisi kunye neembaza
10 Hlanganisa ihashe
12 Iayisi khrimu
Bari sisixeko esaziwayo sase-Italiya, esime phakathi kweNaples nePalermo, kunxweme lwentle Ulwandle lweAdriatic. Inezinqaba zamaxesha aphakathi, ilifa lamaRoma, amabhotwe kunye neethiyetha, ke ubomi benkcubeko bunomdla njengowesisu.
Unxweme lweMeditera lolunye olunikezela iziseko zokutya, Oko kukuthi, intlanzi ezahlukeneyo, oopopus soloko intsha, iiurchins zolwandle kwaye kumnandi iimbaza. Kukho iintlanzi kunye neentlanzi ezityiwa ziluhlaza, kodwa zikhona nezinye ezityiwa ziphekiwe. Kule qela lokugqibela kungena iikreyifishi, iimbaza kunye neentlanzi. Eyona nto ihamba phambili iklasikhi ixutywe nemifuno yalapha kunye neesosi ezinongwe kakuhle.
Imihlaba ejikeleze iBari idume ngomgangatho wazo ioli yeoli, kodwa ikwakhona igalikhi, i imifuno emitsha, i i-cilantro, Las I-chicory, i-aubergines, iimbotyi ezibanzi kunye neenkukhu. Zonke zidityanisiwe, umzekelo, kwezithandwayo Isuphu yemigodi.
Kodwa ngokwazi ezi zithako zisisiseko, masithethe ngoku malunga nezona zitya zaziwayo zeBari cuisine, ukuze siqale ukubeka uluhlu lazo ukutya ntoni eBari.
Es ipasta ebhakwe. Kwakulungiswa ekuqaleni kweLente, kunye nengulube kunye namaqanda okanye nje ngeCawa, kodwa namhlanje ingadliwa nanini na ngeveki kwaye ihlala kwimenyu yokutya.
Ngokubhekisele kwi-pasta ngokubanzi, eBari ipasta yenziwa ngendlela elula, ngamanzi, umgubo kunye netyuwa, kwaye isisiseko sezitya ezininzi. I-classic yi-orecchiette, emiswe ngesandla, okanye i-cavatelli kunye ne-fricelli ezenziwe ukuba zifunxe isosi kakuhle, zihlala zenziwe ngemifuno, inyama okanye intlanzi.
Ngasentla sithethile Unxweme lweMeditera lubonelela ngeentlanzi kunye nokutya kwaselwandle kukutya kwaseBari, kwaye ngamanye amaxesha kuyatyiwa kuphekiwe kwaye ngamanye amaxesha kukrwada. Iintlanzi eziluhlaza ayisiyonto yaseJapan kwaye apha abantu bayithatha njengesiyolo ngokunjalo. Ityiwa njengesithambisi okanye njengesiqwengana esikhawulezayo uthenge ngqo kumlobi.
Intlanzi, kodwa kunye ne-octopus, i-clams, i-lobster ... kwaye ewe, ngaphandle kwencindi yelamuni, ke kuya kufuneka ujonge ezona flavour zinamandla zolwandle, ngaphandle kwesihluzo.
Apha i-focaccia ayisiyonto elula yokutya esitalatweni, iphantse ibe ngamava enkolo, batsho. Esi sidlo sidibanisa umgubo, amanzi, ityuwa, ioyile kunye negwele, kunye neetumato, ii-olive, iiherbs kwaye ngamanye amaxesha kufakwa neetapile. Inguqulelo eneetapile ezibomvu ezigubungelayo njengeetamati ezintsha zimnandi.
Ugxininiso inokuba sisitya esiphambili okanye nje okulula, kodwa uya kuyifumana kuzo zonke iivenkile zepastry esixekweni. Indawo entle yokubhaka iFiore Bakery, ebekwe kwitreyini entle amanyathelo ambalwa ukusuka kwiCawa yaseSan Nicola kunye neCathedral yaseSan Sabino.
Lilungu lesiko laseBari eliqhelekileyo ikhona kuwo onke amakhitshis. Ndithetha ngesgagliozze, isidudu sombona, Uyile, enikwa imilo yesikwere, isikwa ibe ngamacwecwe ize ifakwe emanzini kwioyile eshushu. Isiphumo siyintlama enetyiwa, yegolide kunye nencasa esetyenziswa kakhulu ngabantu balapha.
Omnye wabapheki abadumileyo be-sgagliozze e-Bari nguMaria de Sgagliozze. Namhlanje kufuneka abe ngaphezulu kweminyaka engama-90 ubudala, ukuba usaphila, kodwa uhlala epheka emnyango wakhe aze azithengise phakathi kwe-1 ne-3 euro. Ungumbali ophilayo kwimicimbi ye ukutya kwesitalato eBari.
Kukudala ukufumana abahlobo nangaliphi na ixesha lonyaka. Ngokwesiko ukucaciswa kwayo kuthetha ukuba lonke usapho luyathatha inxaxheba, bajikeleze itafile, konke bekusenziwa kunye. Emva kobunzima kufakwe i-mozzarella kunye neetumato, kufutshane kunye nefry.
KwiBari kukho izinto ezininzi ezahlukileyo kule klasikhi, kodwa enye yezona zidume kakhulu yile kufakwe inyama okanye i-nabwena. ukudla Yindawo elungileyo yokuthenga ii-panzerottis ezilungileyo kwaye uzitye ngelixa uhamba ngeendonga zamaxesha aphakathi, iMuraglia.
Iitapile, irayisi kunye neembaza
Ikhosi yokuqala yeklasikhi yokutya kwaseBari. Kwi Iimveliso zomhlaba kunye nolwandle zidibene ngobuchule. Ngawaphi amanani esithako ngasinye? Akukho mntu unokutsho ngokuqinisekileyo kwaye kusemehlweni nakumava okupheka, kuphela emva koko ibhalansi ifezekisiwe, ibhalansi egqibeleleyo.
Ngokucacileyo, ngoomakhulu okanye oomama abanolo lwandle lomlingo kusapho ngalunye.
Siyiqamba xa sidlula xa sithetha ngepasta eBari. Yeyona ipasta yakudala eBari kwaye kuthiwa ibizwa njalo kuba ikhumbuza indlebe encinci. Ngapha nabo bayambiza icwecwe, igama elihambelana nendlela elilungiselelwe ngayo: ngemela intlama iyaqhekeka ibe ngamaqhekeza amancinci emva koko adityaniswe nentloko yetheniphu, emnandi kakhulu.
Ungayitya phi? Naphina, kodwa umzekelo, phambi kweCastello Svevo, kwidolophu yakudala yaseBari, uya kubona isitalato esinabafazi abaninzi abadala abathengisa ii-orecchiettes ezenziwe ekhaya. Uya kuba nakho ukubona ukuba bazenza njani ngalo mzuzu kwaye bakulungiselela isitya ngaphandle kokuthandabuza. Ngokucacileyo, thatha uhambo ngaphambi kokuthenga. Ixabiso liyahluka ngokweentlobo zeenkozo, kodwa ubale phakathi kwe-5 kunye ne-8 euro.
Idizethi yokuqala kuluhlu lwethu. Imalunga ne- I-postra eyenziwe ngentlama yefilo, igcwele ukhilimu kwaye yambathiswe ngeswekile yeswekile. Iswiti kakhulu.
Ngeeholide okanye ngeCawa kuqhelekile ukuba kunye isidlo sasemini kunye nesitya esihlala sivela kwitafile kukuqotywa kwamahashe ukusuka kwimiqulu yenyama ephakathi ukuya kwelikhulu, enongwe kwi irhawuda, kufakwe itshizi ye-caciocavallo kunye nebhotolo yehagu.
Yiyo ukutya okuqhelekileyo kwesitalato kwaye imnandi. Ikwabizwa ngokuba isilwanyana Kwaye ilungiswa yonke imihla ngoomama bamakhaya kwiimbombo zezitrato eziphambili zeNdala yeDolophu yaseBari. Kwi-Piazza Mercantile uya kufumana ezona zilungileyo.
I-popizze ihamba kunye ne-sgaliozze, ngaphandle kwepolenta.
Asinakulibala iklasikhi yase-Italiya eneenguqulelo zayo zobugcisa eBari. Inguqulelo emnandi yi brioche ezaliswe ice cream kwaye indawo elungileyo ukuzama yiGelateria yeeNtlanga, kunye neetafile zayo esitratweni kunye nendawo yayo enkulu eCastello Normanno - Sevevo, ngobuqaqawuli baseByzantine.
Okokugqibela, njengoko unokuqonda, kukho ukutya okuninzi esitratweni ukuba ungatya ngokuhlala nje kwiplaza okanye kwisitulo esingaphandle kweshishini. UBari unjalo. Ewe ungaya kwiivenkile zokutyela kunye nemivalo (iivenkile zosapho kunye nemivalo zihlala zamkela imali kuphela, ke gcina loo nto engqondweni), kodwa ukuba kukho into ekucetyiswa kakhulu kwesi sixeko sase-Itali, ichanekile hamba, hamba, ulahleke ezitalatweni zayo kulandela amavumba kunye nokungcamla incasa.
Kungenxa yokuba ngasemva kwayo yonke iminyango okanye ifestile okanye izitayile, iikhitshi ezihlala zixakekile zifihliwe. Ekuseni nasemva kwemini uya kubona abantu bencokola, bexhonyiwe, kwaye kulungile.
IGastronomyIindawo zokutyela nemivalo
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhamba kwe-Absolut » Yintoni oza kuyitya eBari
Uyakuthanda ukuntywila? Ndiyayithanda. ukwanga